Newsofexile.com: June 2010
भुटानी मानवाधिकारवादी संगठन (ह्युरोव) का अध्यक्ष एस वी सुव्वाले भुटानमा अहिले भइरहेको जनगणनाको बारेमा एउटा विश्लेषणात्मक लेख लेखेका छन् । अंग्रेजी भाषामा लेखिएको उक्त लेख जस्ताको तस्तै
Posted by अर्जुन प्रधान at 11:25 PM No comments:
लागू औषध प्रयोगमा शरणार्थी किशोर बढे
“नतानुन्जेल चाँही केटाहरु हान्ने गोरु जस्तो गर्छन हरे, त्यो स्वाँक्क सुँघेपछि चाँही तनक्क तन्किन्छन् रे । अनि त यता पल्टायो पल्टिने उता पल्टायो पल्टिने, खै के भाका अहिलेका केटाहरु ।”
यो संवादका हरफहरु भूटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीको काउन्सिल बोर्डमा रहेका काउन्सिलर डिल्लिराम घोर्साइंको हो । केहीदिन अघिमात्र शिविरमा बढ्दै गएको नशाजन्य लागु पदार्थको विषयमा छलफल हुँदा जिम्मेवारी शिविर रेखदेख समितिका पदाधिकारीहरु बसेर छलफल गरिएको थियो ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 2:09 AM No comments:
गोलधाप शिविर जोखिममा
दुइतिरवाट खोला पसेपछि गोलधाप भुटानी शरणार्थी शिविरमा हाहाकार मच्चिएको छ । दायाँ रहेको देउनिया खोलो र बायाँ रहेको वैतर्णी खोलोको बाढी शिविरभित्र पसेपछि अहिलेसम्म करिव ६५ प्रतिशत छाप्राभित्र पानी पसेको छ ।
बाढिको पानीले शरणार्थीका चामल, व्रिकेट, लुगाकपडा, महत्वपूर्ण कागजपत्र आदि जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु भिजाएर पनि शरणार्थीहरुमा थप संकट थपिएको छ ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 12:12 AM No comments:
Posted by अर्जुन प्रधान at 11:44 PM No comments:
किन मनाउने शरणार्थी दिवस
संयुक्त राष्ट्र संघले एक दशक अघिबाट २० जुनका दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाउन सुरु गरेको छ। दुई दशकअधि आफ्नो भूमिबाट बलपूर्वक लखेटिएका भुटानीहरूले पनि आरम्भ्देखि नै यस दिवसलाई मनाउँदै आएका छन्। शरणार्थीहरूले नाँचेर, गाएर, कविता, गजल वाचन गरेर, खेलेर, उफ्रिएर जसरी भए पनि यो दिवस मनाउँदै आएका छन्। शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चआयोगले दिने केही रकमले वाध्य तुल्याउँछ, यो दिवस नमनाउन - ‘शरणार्थी भएपछि मनाउनै पर्छ रे’। यो दिवस नमनाउने शरणार्थी, शरणार्थी हुनै सक्दैन रे! खुसी देखाउन वर्षमा एकदिन भए पनि रुन्चे हाँसोसहित मनाउनै पर्छ।
२० जुन अर्थात् ‘विश्व शरणार्थी दिवस’ हो। विश्वमा अलपत्र परेका चार करोडभन्दा बढी मानिसको दिवस। आश्रयविहीन तुल्याइएकाहरू लागि एक दशक अघिदेखि मनाउन थालिएको दिवस। जन्मभूमि छाडेर भाग्न वाध्य हुनेहरूको दिवस। बिर्सिइएकाहरूका लागि वर्षमा एक पटक सम्झना गरिने दिवस। मुलुकबाट बलजफ्ती गलहत्याइएका मानिसहरूको दिवस। राष्ट्र गुमेकाहरूको दिवस। अधिकार खोसिएकाहरूको दिवस। परिवारबाट विछोडिएकाको दिवस। चलअचल सम्पत्ती लुटिएकाको दिवस। आफ्नो मातृभूमिबाट रुँदै अर्काको देशमा शरण माग्न पुग्नेहरूको दिवस। अनिश्चित भविष्य लिएर जिउनेहरूको दिवस। योग्यता र दक्षताहुँदा पनि मान्यता नपाउनेहरूको दिवस। गन्तव्य हराएका मानिसको दिवस। जाति, भाषा, संस्कृतिसहित समाजभित्र हुर्किए पनि अस्तित्वविहीन तुल्याइएकाहरूको दिवस। सक्षम हुँदाहुँदै पनि अशक्तहरूलेजस्तो सहयोगको प्रतीक्षामा जिउन वाध्य हुनेहरूको दिवस। राष्ट्र, गाउँ, घर, अस्तित्व केही नभएकाको दिवस।
Posted by अर्जुन प्रधान at 11:39 PM No comments:
विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा
अन्तराष्ट्रिय स्रष्टा माच र गन्तव्य थिएटर दमकको सँयुक्त आयोजना तथा भूटान समाचार सेवाको प्रायोजन तथा विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा आज दमकमा नेपाल भूटान मैत्रीपूर्ण चित्रकला प्रतियोगिता रङ्गमा बिस्थापन बिम्ब आयोजना गरियो ।
Posted by अर्जुन प्रधान at 2:29 AM No comments:
Jeetan Subba and Arjun Pradhan
Beldangi-I, June 18: The resident representative of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Stephen Jacquemet has promised that the agency would constantly advocate for repatriation of the Bhutanese citizens.
“Some of you are critical to UNHCR that it promotes just resettlement,” he said while addressingafunction organized here to mark World Refugee Day 2010, “I refute such allegations. UNHCR is constantly advocating for your dignified repatriation.”
Posted by अर्जुन प्रधान at 5:48 AM No comments: